राजधानी ‘विराटनगर’मा मतदान नगर्ने ६ सांसद यी हुन् ? - Sagarmatha Online News Portal
राजधानी ‘विराटनगर’मा मतदान नगर्ने ६ सांसद यी हुन् ?
विराटनगर । प्रदेशसभाका ६ सांसदले राजधानी तोक्ने प्रस्तावमा मतदान गरेनन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतापप्रकाश हाङ्गामले मतदान गरेनन् । उनले विराटनगर राजधानी तोक्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिदै बैठकबाटै बाहिरिएका थिए ।
कांग्रेसका सांसदहरु ज्योती सुब्बा, अगमलाल चौधरी, संघीय समाजवादी फोरमका सांसदहरु रामचन्द्र लिम्बू, राधा थापा र नेकपाका सांसद गणेश काम्बाङ अनुपस्थित रहे । मत विभाजनमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी मतदान गर्नबाट वञ्चित रहे ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नियम निलम्बन गरियोस् भनि प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा संघीय समाजवादी फोरमका नेता जयराम यादवले समर्थन जनाए हुन् । प्रस्तावमा उल्लेखित ‘विराटनगरलाई राजधानी तोकियोस’ भन्ने प्रस्तावमा मत विभाजनका लागि पक्ष र विपक्षमा राखिएको क्रम संख्या सहितको नामावली मध्ये सांसदले पक्षमा रहने सांसदलाई सभामुखको दाहिने लबी र विपक्षमा हुने सांसदलाई देब्रे लबीमा हस्ताक्षर गर्न सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आग्रह गरे ।
Published On: २४ बैशाख २०७६, मंगलवार 585पटक हेरिएको